Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक : अनियमित खर्च ५ खर्ब ८ करोड – Emountain TV
महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक : अनियमित खर्च ५ खर्ब ८ करोड
काठमाडौं, २९ चैत । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मुलुकको ढुकुटीबाट अनियमित खर्चको रकम ५ खरव ८ करोड पुगेको विवरणसहितको प्रतिवेदन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५५ औं प्रतिवेदनमा हालसम्मको बेरुजु रकम ५ खरव ८ करोड पुगेको उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परिक्षक टंकमणि शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस वर्ष मात्रै १ खरव २० अरव ९१ करोड बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षक शर्माले कूल ४६ खरव ८७ अरव ९१ करोड लेखा परीक्षण गरिएको जानकारी दिए ।
यस वर्ष सबैभन्दा बढि बेरुजु मन्त्रालयहरुमा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयमा देखिएको छ । मन्त्रालयहरु मध्ये सबैभन्दा बढि खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको १९ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको पनि महालेखा परीक्षक शर्माले बताए ।
त्यसैगरी प्रदेश नम्बर २ मा सबैभन्दा बढि बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशहरुमध्ये प्रदेश नम्बर २ मा १३ दशमलव २७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । अन्य प्रदेशहरुमा यस भन्दा कम बेरुजु देखिएको पनि महालेखा परीक्षक शर्माले बताए ।
प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु १६ अरव १६ करोड रहेको छ । त्यसैगरी १ खरव ६१ करोड राजस्व बक्यौता देखिएको छ । यो गतवर्ष भन्दा २२ प्रतिशतले बढि हो । प्रतिवेदनमा कर तिर्न अटेर गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदका क्रममा कर छलीको विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष ३२ अरव ५५ करोड विविध शिर्षकमा मनोमानी ढंगले रकम वितरण गरेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनमा कूल बजेटको २८ प्रतिशत हिस्सा असार महिनामा मात्रै खर्च भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । धितोपत्र व्यवसायीको कमिसनबापट १६ करोड ६२ लाख उठाउन बाँकि रहेको पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पछिल्ला केही वर्षयता बेरुजु कम गर्दै लैजान सरकारलाई सचेत समेत गराउँदै आएको छ ।